Billy Summers sitere na Stephen King
Mgbe Stephen King na-elekwasị anya, site na aha nke akwụkwọ akụkọ ya n'ụzọ doro anya, na agwa, anyị nwere ike ịgbanye eriri oche anyị n'ihi na enwere akụkụ. Ọ bụghị na anyị ga-achọta ikekwe akwụkwọ akụkọ ya kacha mma (ma ọ bụ ikekwe ee). Ihe doro anya bụ na anyị ga-anụ ụtọ ...
Awakening of Heresy, nke Robert Harris dere
Oge na -abịa mgbe niile mgbe onye ọ bụla na -akọ akụkọ ifo na -ejedebe na -enyo enyo nke ụbọchị n'ihi ọnọdụ ọjọọ nke oge dị anya. Robert Harris agaghị abụ ihe dị iche. N'ime obodo ebe okwukwe na nkwenkwe chụpụrụ ...
Onweghi onye megide onye ọ bụla, nke Juan Bonilla dere
Ọ ga -abụrịrị ihe na -agwụ ike ịmalitegharị akwụkwọ akụkọ. Ọbụna ịbụ otu Juan Bonilla. Ọ kwesịrị ịbụ ihe dị ka iche na ihe mbụ furu efu na ekwesịrị ịmalite ya site na isi, na ndetu echiche na ndepụta nke edemede adịghị na nkọwa ya niile. Ma ọzọkwa ...
Prọfesọ ahụ, nke John Katzenbach dere
Enwere ihe gbasara ndị agadi, ndị lara ezumike nka, ndị di ha nwụrụ, ndị owu na -ama na ihe ọ bụla na -ekpughere ha na ụwa iwe na akụkụ akwụkwọ ya na -enweghị mgbagha. Karịsịa n'akụkụ nke enyo enyo na -arụtụ aka na oghere dị egwu nke na -abawanye ohere n'etiti oghere nke ...
Peeji1 Peeji2 ... Peeji26 Ọzọ →